म हजुरआमा कडा, हिउँदमा न्यानो लुगा लामो अंडरवियर लगाउने निश्चित हुन सल्लाह गर्दा निश्चित धेरै महिलाहरु दिन सम्झना छु। त्यसपछि हामी केही यस्ता दिशानिर्देश धेरै महत्त्व संलग्न थिएन, र यो थैली को सुनिंनु रोकन लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। यो समस्या अक्सर उचित सेक्स सामना गर्नुपरेको थियो। यस्तो समयमा गंभीर बलिरहेको र बेचैनी रूपमा लक्षण urination, बारम्बार शौचालय प्रयोग गर्न आग्रह, महिला को 70% गर्न परिचित। यसबाहेक, तिनीहरूलाई अप्रिय sensations लगभग 15% फिर्ता फेरि। यस लेखमा हामीले यो विकृति उपचार गर्न भन्दा थैली संक्रमण कसरी विकास गर्ने बारे थप भन्नेछु, र यसको प्राथमिक लक्षण के हो।
को थैली मा भडकाऊ प्रक्रिया - यो महिला को प्रकृति को एक साधारण मूत्र संबंधी समस्या छ। cystitis - विशेष चिकित्सा साहित्य यो रोग एक अर्को नाम पूरा गर्न सक्छन्। को भडकाऊ प्रक्रिया बेचैनी धेरै हुन्छ। मानिसहरू तिनीहरू सीधा मूत्र एक फरक anatomical संरचना छ, किनभने धेरै पटक कम रोग फेला परेन।
Cystitis सधैं को उपचार मा एक कुशल दृष्टिकोण आवश्यक छ, वा पहिले नै एकदम गम्भीर जटिलताहरू entails जो अन्तस्करणले, गर्न संक्रमण थप प्रसार को जोखिम बढ्छ। को mucosa मा सीधा भडकाऊ प्रक्रिया सुरुमा गठन। यसको उपस्थिति परिवार इतिहास वा जीवन शैली महिलाहरु बिना कुनै पनि उमेर मा पूर्ण छ निर्धारण। लागि औषधि पनि थैली को सुनिंनु किनभने यसले चिकित्सा समयमा छानिएन छैन रोग बढन सक्छ, एक डाक्टर नियुक्त गर्नुपर्छ।
महिला मा urethra विशेष excretory अंग व्यावहारिक पूर्णतया bends को devoid छ। अर्कोतर्फ, यो धेरै छोटो पनि मानिसहरू भन्दा व्यापक छ। महिला urethra किन संक्रमण नियन्त्रण गर्न थप susceptible छ भन्ने छ।
न्यानो महिनामा पनि pathogenic microflora शायद छ भडकाऊ प्रक्रिया गठन provokes। यो गुदा को एक hotbed र योनी नै गर्न प्रवेश मानिन्छ। तर, पनि प्रतिरक्षा प्रणाली वा hypothermia को सानो malfunctions लागि banal सूक्ष्मजीवहरु को थैली मा urethra मार्फत भित्र पस्नु र सक्रिय जसबाट रोग (cystitis) को विकास प्रोभोकिंग, त्यहाँ पैदा गर्न थाल्छन्।
सामान्यतया, महिला मा मूत्र थैली को सुनिंनु विभिन्न संक्रामक प्रकृति छ। Staphylococci, ई कोलाई, Trichomonas: मुख्य रोगजनकों को भूमिका मा निम्न रोगजनकों कार्य गर्न सक्छ। निम्न कारक योगदान रोग संक्रमण को उद्भव साथै:
हर्मोन प्रकृति को विभिन्न प्रकार।
सबै ज्ञात पालन गर्न विफलता , व्यक्तिगत स्वच्छता को नियम महिनावारी समयमा सहित।
गलत दूर defecation प्रक्रिया हटाउन।
को genitourinary सिस्टम को रोगहरु को उपस्थिति।
यी सबै कारक एक थैली संक्रमण entail गर्छन। यो रोग को कारण प्रत्येक विशेष मामला मा फरक हुन सक्छ।
सामान्यतया, समग्र लक्षण 14 दिनको लागि जारी राखे। त्यसपछि एक सजिलै देखिने राहत र पूर्ण रिकभरी हुन्छ। यदि दुखाइ र बेचैनी2हप्ता मार्फत जान गर्नुभयो, त्यसैले, रोग पुरानो चरण पारित गरिएको छ। यो रोग को सबै भन्दा साधारण लक्षण।
urinate गर्न निरन्तर चाहनाको।
Clouding मूत्र, रक्त उपस्थिति अशुद्धताओं।
तल्लो पेट क्षेत्रमा दुखाइ, प्रकृति मा aching द्वारा विशेषता।
urination समयमा अनुभूति र ऐंठन जल।
मूत्र असंयम (धेरै दुर्लभ)।
कम ग्रेड ज्वरो।
महिला मा मूत्राशय को सुनिंनु ध्यान बिना नछोड। उपचार प्रबन्ध गर्नुपर्छ तुरुन्तै निदान पछि। जो धेरै गम्भीर जटिलताहरू (को excretory सिस्टम को अन्य भागहरु गर्न संक्रमण फैलाउने) दिन सक्छन् एक बरु धूर्त विकृति - यो कि cystitis बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
रोग को प्रकारका
आधुनिक चिकित्सा, रोग यसको संकेत र लक्षण अनुसार वर्गीकृत छ। उदाहरणका लागि, प्रोभोकिंग कारक को प्रभाव अन्तर्गत हुन्छ जो अचानक भडकाऊ प्रक्रिया जब थैली को तीव्र सुनिंनु निदान छ।
वी डी र एक उच्चारण बेचैनी संग खत्म गर्दा पुरानो cystitis विकल्प देखिन्छ विविध नैदानिक तस्वीर, सानो दुखाइ देखि।
रोग र undulating पाठ्यक्रम एक स्थिर सक्रिय सुनिंनु संग ती: पुरानो सुनिंनु विरामी पारंपरिक दुई समूह विभाजन।
कसरी थैली संक्रमण हटाउन? त्यो तत्संबंधी प्रारम्भिक लक्षण को उपस्थिति धेरै महिला उठाएको प्रश्न हो। डाक्टर कडा मित्र र परिवारका councils मदत खोज्न छैन, त्यो छ, आत्म-medicate गर्न सुझाव दिन्छौं। यो कुरा राम्ररी चुनिएको उपचार मात्र थैली को सुनिंनु exacerbate पहिचान कुनै कारण विकास समस्या र हालको नैदानिक तस्वीर samazannoy हुनेछ सक्नुहुन्छ। यसरी, जब एक प्राथमिक विशेषताहरु तुरुन्तै मदतको लागि कसैले सम्पर्क गर्नुपर्छ।
विकृति पुष्टि मात्र क्लिनिकल र निदान अध्ययन आधारमा सम्भव छ। Palpation कम पेट क्षेत्र रोगी सामान्यतया बेचैनी र पीडा महसुस, जो तीव्रता भिन्न हुन सक्छन्। हामीलाई क्षतिग्रस्त अंग को सामान्य संरचना पर्खालहरु को परिवर्तन प्रतिबिम्बित छ जो सुनिंनु, उपस्थिति पुष्टि गर्छ।
यो एक मूत्र विश्लेषण प्रदान गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। रोग को मामला मा यो प्रोटिन, एक उच्च सामग्री समावेश यूरिक एसिड, खकार र erythrocytes।
डाक्टर कुनै अपवाद सबै विरामीहरु जाँच्ने gynecological कुर्सी PCR, जैविक र cytological परीक्षा को लागि जैविक सामाग्री को नमूना कार्य गर्दछ। रोग एक लामो समयसम्म पाठ्यक्रम घटनाको एक बायोप्सी र cystoscopy सहित थप परीक्षण, एक नम्बर आवश्यक हुन सक्छ।
एक थैली संक्रमण कसरी निको पार्न गर्न?
सबै चिकित्सकीय उपायहरु मात्र एक विशेषज्ञ द्वारा नियमित अनुगमन अन्तर्गत बाहिर गर्नुपर्छ। घर मा, यो एक बख्शते आहार संगठित र पिउने एक सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण छ। दिन पानी कम्तिमा दुई लिटर पिउन गर्नुपर्छ। भिटामिन रोग को उपचार मा एक प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ। मादक पेय, साथै कफी को प्रयोग सिफारिस गरियो। उपचार को अवधि मा मसालेदार व्यञ्जन र मसाले हरेस राम्रो छ। जब कब्जियत आहार अमिल्याएर दूध पेय, प्राकृतिक फाइबर (जस्तै, स्याउ) विविधता गर्नुपर्छ।
तपाईं थाह छ, एक राम्रो अप्रिय लक्षण महिलाहरु मा मूत्राशय को सुनिंनु सँगसँगै। यस्तो समस्या को उपचार दबाइ को एक प्रयोग implies। पुरानो रोग पाठ्यक्रम लाभप्रद को मामला मा भौतिक चिकित्सा को प्रयोग हो।
यो जटिल उपचार र cystitis को रोकथाम अक्सर प्राकृतिक जस्तै छोड्दा bearberry निकाल्ने, horsetail र Cranberry फल, तरकारी घटक आधारित उत्पादनहरु प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, "Uroprofit जसको घटक, रोगाणुरोधी विरोधी भडकाऊ र spasmolytic प्रभाव '। यसको संरचना मा biologically-सक्रिय पदार्थ, urination को normalization गर्न, गुर्दे समारोह र मूत्र सुधार, र पनि पुरानो cystitis को आवर्तक exacerbations जोखिम कम योगदान पुग्छ।
रोग विभिन्न संक्रामक प्रकृति हो भने, एन्टिबायोटिक नियुक्त छन्। वर्तमान समयमा, विशेषज्ञहरु अनुसार, सबैभन्दा प्रभावकारी निम्न एन्टिबायोटिक हो:
चिकित्सकीय पाठ्यक्रम, नियम बारे सात दिन देखि तीन, छ।
यो थैली सुनिंनु चिकित्सक एक विशिष्ट दवादारू को प्राप्त विश्लेषण परिणाम आधारमा छनोट भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। प्रस्ताव एन्टिबायोटिक तिनीहरूले सुरक्षित प्रयोग गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य को लागि सुरक्षित छन्।
प्राकृतिक हर्बल तयारी
मानक सिफारिस urologists - उपचार र लागि प्राकृतिक उत्पादन प्रयोग cystitis रोकथाम। यसरी दबाइ "Uroprofit" भइरहेको रोगाणुरोधी, विरोधी-भडकाऊ र spasmolytic प्रभाव छ। को biologically सक्रिय एजेन्ट को "Uroprofit" urination को normalization योगदान मा, गुर्दे समारोह र मूत्र सुधार, र पनि पुरानो cystitis को आवर्तक exacerbations जोखिम कम समावेश।
को थैली को सुनिंनु सधैं उपचार गर्न अत्यन्तै कुशल दृष्टिकोण आवश्यक छ। केही विशेषज्ञहरु परम्परागत चिकित्सा को व्यञ्जनहरु संग मिलेर एक pharmacological हस्तक्षेप को प्रयोग, सुझाव। अभ्यास शो रूपमा, यो समाधान अक्सर इच्छित प्रभाव ल्याउँछ। तल दिइएका यो रोग विरुद्ध हाम्रो हजुरआमा को सबै भन्दा साधारण व्यञ्जनहरु छन्।
भोजन अघि तपाईंले हप शंकु को एक सरल जलसेक पिउन सक्नुहुन्छ। यसको तयारी लागि 500 एमएल भन्दा सामान्य गैर-Carbonated पानी र शंकु को2चमचा आवश्यक हुनेछ। सामाग्री त्यसपछि नाली, घण्टा एक जोडी को लागि Infuse, मिश्रित हुनुपर्छ। आधा कप एक दिन चार पटक पिउन परिणाम जलसेक।
एक उत्कृष्ट embodiment को शोरबा मिश्रण घाँस (inflorescence chamomile, पुदिना पात, चिनार तन्तु) बाट मानिन्छ। एक चमचा सुख्खा मिश्रण पानी उम्लिरहेको एक गिलास आवश्यक छ। यो चार घण्टा लागि सिफारिस गरिएको छ "चिकित्सा" Infuse, त्यसपछि फाटो। को जलसेक तीन पटक पिउन एक दिन आवश्यक छ र केवल प्रत्यक्ष इन्जेशन गर्न।
को चेरी वा चेरी को stems देखि तरल पदार्थ को सुनिंनु को उपचार को समयमा ठूलो परिमाणमा खपत गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई आधारित, यो चिया को एक उत्कृष्ट माध्यम हुन मानिन्छ। यो सम्भव सुकेको स्प्राउट्स र ताजा रूपमा प्रयोग गर्न गर्न। परिणामस्वरूप चिया पिएको खाली पेट मा हुनु पर्छ, तपाईं मह थप्न सक्नुहुन्छ।
माथिको व्यञ्जनहरु को सबै थैली को सुनिंनु जस्ता रोगहरु मा अप्रिय लक्षण को प्रकटीकरण कम गर्न मद्दत गर्छ। लोक उपचार पनि सुनिंनु को तीव्र घटना कम गर्न मद्दत। एक उत्कृष्ट embodiment rhizomes को जलसेक संग हिप स्नान छलफल सिमसार calamus। rhizomes को चम्मच, पानी उम्लिरहेको एक गिलास खन्याउन र अडान दिनु त फाटो आवश्यक छ। प्रक्रिया अघि, पानी दुई भागहरु मा जलसेक को एक भाग भंग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
माथि उल्लेख रूपमा, हामी यस्तो समस्या महिलाहरु मा मूत्राशय को सुनिंनु रूपमा, बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यस रोग प्रक्रियाको उपचार एक चिकित्सक नियमित अनुगमन अन्तर्गत बाहिर गर्नुपर्छ। अन्यथा, एकदम जटिलताहरुलाई गठन को likelihood बढ्छ।
लामो रोग संक्रमण मा एक एकदम गम्भीर समस्या, अर्थात्, pyelonephritis विकास entails जो अन्तस्करणले, फैलियो गर्न सक्नुहुन्छ। रोग कटि क्षेत्रमा ज्वरो र गंभीर दुखाइ द्वारा विशेषता छ। Pyelonephritis, सामान्यतया यो एक प्रमुख चिकित्सा आवश्यक छ, र एक अस्पताल वातावरणमा। तर, यो मामला मा, मूत्राशय को एक सुनिंनु सीधा नै पृष्ठभूमिमा मा हराउँछ। एक परिणाम स्वरूप, रोग फेरि महसुस हुनेछ, र pyelonephritis प्रत्येक नियमित आक्रमण संग अनिवार्य भएको अन्तस्करणले worsens। फलस्वरूप, रोगी असक्षम रहने गर्छ र गर्न सक्नुहुन्छ।
यस रोग प्रक्रियाको थैली पर्खाल संरचना को व्यक्तिगत विशेषताहरु को उपस्थिति मा यसरी मात्र होइन श्लेम लाग्एको झिल्ली तर पनि मांसपेशी भाग प्रभावित, आफ्नो मोटाइ सम्पूर्ण फैलियो गर्न सक्नुहुन्छ। यो विकृति भनिन्छ अंतरालीय cystitis।
रोग को यस प्रकारको धेरै सुविधाहरू द्वारा विशेषता छ। उदाहरणका लागि, विरामीहरु प्रति दिन 150 पल्ट urination संख्या बढ्ने, शरीर तापमान rises। को थैली को सुनिंनु को लागि औषधि, यो मामला मा अप्रभावी हुन बाहिर बारी। लामो विकृति शरीर यसको सामान्य लोच हराउछ र बिस्तारै आकार मा कम। जब यो मात्रा 50 एमएल, को शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप (बबल पूरा हटाउने र यसको पछि प्लास्टिक पेट पुछ्ने) बारे निर्णय पुग्छ।
पूर्वोक्त आधारित यो भडकाऊ प्रक्रिया आवश्यक छैन, तपाईं चाहनुहुन्छ भने, पाठ्यक्रम, यस्तो अप्रिय जटिलताहरुलाई विकास बच्न बेवास्ता गर्न भनेर स्पष्ट हुन्छ।
प्रसिद्ध छ, यो भन्दा पछि उपचार गर्न एक थैली संक्रमण रोक्न सजिलो छ। विशेषज्ञहरु सबै निष्पक्ष सेक्स एक एकदम सरल नियमहरू पालन गर्न सुझाव। पहिलो चरण promiscuity नत्याग्ने हो, र तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कंडोम प्रयोग गर्न हरेक यौन कार्यमा लागि हुनुपर्छ। साथै, यो जाडो मा थर्मल अंडरवियर आनन्द, supercool छैन प्रयास गर्न सिफारिस गरिएको छ। स्वच्छता को सबै ज्ञात नियम अनुपालन - अर्को preventative उपाय छ। रोग अझै पनि छैन एन्टिबायोटिक संग बिना गम्भीर उपचार नहीं हुनेछ, जोगिन सक्षम छ भने। यस मामला मा आदर्श समाधान तथाकथित एकीकृत दृष्टिकोण, अर्थात् चिकित्सा हस्तक्षेप + परम्परागत चिकित्सा को व्यञ्जनहरु छ।
यस लेखमा हामी महिला एक थैली संक्रमण भिन्नता भन्नेछु। यो रोग को उपचार तुरुन्तै प्राथमिक लक्षण को उपस्थिति पछि, तर डाक्टर र परामर्श सुरु गर्न सिफारिस गरिएको छ। तपाईं तथ्याङ्क विश्वास गर्नुहुन्छ भने, यो धेरै छिटो प्रयोग गरेर यो रोग को समसामयिक उपचार संग हटाउन सम्भव छ। अन्तिम रिकभरी आफ्नो स्वास्थ्य अनुगमन धेरै महत्त्वपूर्ण छ पछि, hypothermia बच्न र व्यक्तिगत स्वच्छता को सबै ज्ञात नियम पालन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। स्वस्थ रहन!
Helicobacter - लक्षण, उपचार, निदान
"उराल" को आफ्नै हातमार्फत क्वाड्राइसाइकलहरू - यो सम्भव छ
भूमध्य व्यंजन: व्यंजनों। भूमध्य व्यंजन को विशेषताहरु
पुरानो वलपेपर कसरी आउँछ। कसरी पुरानो वालपेपर हटाउन सकिन्छ
पुस्ता कम्प्युटरको: तालिका विशेषताहरु, र इतिहास। शब्द "कम्प्युटर पुस्ता" के अर्थ छ?